नेकपा फुट्दै कुन:समूहमा को ? (नामावलीसहित) — Jana Garjan
नेकपा फुट्दै कुन:समूहमा को ? (नामावलीसहित)
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर वैशाख १७ र २७ मा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि दुई समूह एकै ठाउँमा बस्नसमेत सकेका छैनन् । दुबै समूहले सोमबार आ-आफ्नो पक्षका संघीय सांसदहरुको भेला गरेका छन् । र, यसैको सिलसिला अन्तरगत आज मंगलबार समानान्तर केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ ।
नेताहरुका अनुसार मंगलबार दुबै पक्षको केन्द्रीय कमिटीले फुटलाई औपचारिकता दिनेछन् । असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा विवाद फुटतर्फ उन्मुख भएको हो । नेताहरुका अनुसार कुनै उथलपुथल नभए आजओली र प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल पक्षले एकअर्कालाई कारबाही गरेर पार्टी विभाजनलाई औपचारिकता दिने सम्भावना छ ।